Gini bu Njikọ aka na gịnị kpatara o ji dị mkpa? ECommerce ozi ọma
Mgbe ọ bịara ahịa n'ịntanetị, Enwere ọtụtụ akụkụ nke a ga-atụle iji nweta nsonaazụ kacha mma; Njikọ aka, Ọ bụ otu n'ime ha. Ọ bụ usoro ahia nke ahụ na ndị na-azụ ahịa na-akpakọrịta ma na-agba ha ume isonye na mgbanwe nke azụmaahịa ma ọ bụ akara.
Kedu ihe ntinye aka?
con ntinye aka, Kama ile ndị ahịa anya dịka ndị nnata ozi dị mfe, a na-ahụ ha dị ka ndị na-azụ ahịa bụ ndị ga-enyerịrị ikere òkè na mmepụta na mmekorita nke mmemme mmemme, na-emepe mmekọrịta na ika ahụ. Njikọ ndị ahịa na-eme mgbe akara na onye na-azụ ahịa jikọtara, mgbe enwere mmekọrịta n'otu n'otu na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta njikọ na ụdị.
El itinye aka na-atụle ogo nke onye ahịa nwere ahụmịhe ọhụụ bara uru site na igosipụta mgbasa ozi azụmahịa, nkwado ma ọ bụ kọntaktị telivishọn, n'etiti ahụmịhe ndị ọzọ. Dabere na nyocha banyere isiokwu a, mmadụ iri na otu n’ime ndị ahịa iri na anọ kwuru na ha na-ahọrọ ịmụ banyere ngwaahịa na ọrụ ọhụụ site na ịnweta ha n’onwe ha ma ọ bụ ịnụ banyere ha n’aka onye ha maara.
Principleskpụrụ bụ isi nke Njikọ Aka
Maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, akụ ha kachasị baa uru abụghị ngwaahịa ha, akara ngosi ha ma ọ bụ ọbụlagodi ndị otu ha, ọ bụ ndị ahịa ha. Na ụlọ ọrụ na-eme nke ọma bụ ndị na-esonye na ndụ ndị ahịa ọ bụla, site na inweta ndị na - azụ ahịa ọhụụ, uto na ntughari ha bụ ndị na - akwalite akara ngosi.
Ọ kpọkwara "Mgbakwunye aka", Ọ bụ maka ijikọ ndị mmadụ na ịtọlite ​​ụkpụrụ ndị akọwapụtara nke ọma gụnyere: ịgwọ ndị mmadụ n'otu n'otu, iburu n'uche ihe ha na-eme, ịga n'ihu na-arụ ọrụ oge, na-elekwasị anya na nsonaazụ na ịnọ ebe ha nọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Gịnị bụ Njikọ Aka na gịnị kpatara o ji dị mkpa maka azụmahịa gị?
Omume CRM kacha mma maka ụlọ ọrụ gị